IMbizo yokunqada ukuthenwa kukaZulu – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/IMbizo yokunqada ukuthenwa kukaZulu
IMbizo yokunqada ukuthenwa kukaZulu
Ubukhosi News July 6, 2018
Imbenambena inkulu ekaBhusha obukhali ayivumi ukuya ejokeni, kanti noZulu usuqalile ukuvungama
Emuva kweziwombe zokucokofulwa kukaZulu odabeni lomhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust, oNgangezwe Lakhe ngomlomo kaNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindange usuku ubize iMbizo kaZulu. Imbizo izoba soNdini mhla zi-4 kuNtulikazi nonyaka. Ememezela eSizweni uMntwana wakwaPhindangene uthe “Noma ngabe ngubani eSizweni sikaZulu unelungelo lokwethamela leMbizo. Futhi kayikhethi bulili, wonke ozithatha njengengxenye yeSizwe sikaZulu unelungelo lokuyethamela leMbizo,” kuphetha isimemezelo soMntwana.
IMbizo ilandela uchungechunge lwemihlangano yokubonisana kulandela isiga esenziwe nguMnu uKgalema Motlanthe nethimba lalabo ababizwa ngongoti iHigh Level Panel on Assessment of Key Legislation and Acceleration of Fundamental Change.
Embikweni owabe ungamakhasi angama-601, isiphakamiso nge-Ingonyama Trust sathi uZulu akemukwe lo mhlaba ancwetshwe “ukuze iKwaZulu-Natal ihambisane nenqubomgomo yezwe”.
Kuthe kusenjalo wabuye wazininda uMontlanthe ngesikhathi eqhubeka nokuklina ecokofulwa ephinde ejivaza iSihlalo sikaZulu noBukhosi jikelele yilowo Ekhuluma emhlanganweni wokubonisana ngomhlaba obuhlelwe yi-African National Congress (ANC) mhla zili-19 kuNhlaba nonyaka. Lo mhlangano ububheka kabanzi isinqumo se-ANC sokuthatha umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo nosekubaphoqe ukuba bake babuke ukuthi engabe uMthethosisekelo wezwe awuwona yini umgoqo kulokho, ikakhulukazi iSigaba 25.
Kulomhlangano uMotlanthe ongesenasikhundla kuleli qembu ushiya angalazi eBukhosini naseMakhosini, esho nokuthi uBukhosi bungondlovu kayiphikiswa namaqhud’ukuzibeka. Okwacaca enkulumeni kaMotlanthe wukuthi yize ayezungeza kepha ulaka lwakhe lwabe lubhekiswe kuZulu okuyiwo kuphela kuleli onohlaka elithi ithimba lakhe longoti lwakhiwa ngezikhathi zobandlululo. Okumangazayo ngale nkulumo wukuthi kuyo akasabalwa uMnu uMandela naye owabe eyingxenye yokwakhiwa kwalo mthetho owaba ngowokugcina owashaywa yiSishayamthetho sakwaZulu, i-Ingonyama Trust Act (Act No 3KZ of 1994, ngaphansi kobuholi boMntwana wakwaPhindangene owayenguNdunankulu ngaleso sikhathi. Okunye okungasabalwa kulo mbiko weThimba likaMotlanthe nokukhuluma ezweni wukuthi ukushaywa kwalo mthetho olawula i-Ingonyama Trust wukuthi eminyakeni emithathu wabakhona, ngonyaka we-1997 iPhalamende elilawulwa ngaphansi kwedemokhrasi lawuchibiyela lo Mthetho. Lokhu kuchitshiyelwa kwaziwa ngokuthi yiKwaZulu-Natal Ingonyama Trust Amendment Act (Act No. 9 of 1997). Okugqamayo yinhloso yokunyunda kulunjaniswe lokho uZulu ahlale ethi yithonsi kulokho okwabe kubunjwe yiLembe nombuso owabe unonya wobandlululo.
Ikhuluma kwaDukuza ngonyaka owedlule eMkhosini Wokugubha Impilo Nobuqhawe BeLembe, IMbube yoMhlaba yakhumbuza labo ‘abagxibha uZulu’ ukuthi umhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust, awusona isihe uZulu asenzelwa nguHulumeni kepha wukubuyiswa kwesiphuku sakhe uZulu ayesemukwe ngamaKoloni kanye noHulumeni wamadlagusha.
Ukuhlongozwa kokuthathwa komhlaba kaZulu kuhumusheke njengemizamo kaHulumeni Wentando Yeningi yokuthena uZulu. Lokhu okungeyona into entsha njengoba namaKoloni azama okufanayo kanjalo noHulumeni wobandlululo.
AMakhosi kuzwelonke ami noZulu kwelomhlaba